Ukuphupha ngeMelon Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iimeloni zihlala zibizwa ngokuba ziziqhamo, nangona zisemthethweni kwisiqhamo semifuno, ngokuchanekileyo njengekhukhamba kunye ne-zucchini kusapho lwethanga. Kuxhomekeke kuhlobo lwevatala, umgubo wayo ubomvu, orenji, mhlophe okanye tyheli, kunye okanye ngaphandle okanye ngamatye amancinci kuphela.
Ngokukodwa ehlotyeni, i-melon ikwixesha eliphakamileyo apha kwaye ithandwa kakhulu. Nokuba yisaladi, kwiidizethi, njengokutyiwa kwecocktail, okanye iqabaka njengomkhenkce, iivatala zingafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo. Ivatala ngokukodwa isetyenziswa njengokuhlaziya okuncinci ebushushwini.
Kwisicatshulwa esilandelayo uya kufumanisa ukuba imelon emnandi kunye nesiqhamo ithetha ntoni njengomqondiso wephupha. Kuqala, nangona kunjalo, masiqwalasele uhlobo olukhethekileyo lwemelon oluhlala lubonwa emaphupheni: ivatala.
1 Uphawu lwephupha «imelon» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Emnandi: ivatala emaphupheni
2 Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imelon» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Emnandi: ivatala emaphupheni
Ukuba ivatala emnandi ibonakala ngathi sisiqhamo sephupha, umntu ophuphayo angonwaba ngolonwabo luthando. Oku kunokuzibonakalisa kwi el mundo ukuvuka ngohlobo lweqabane elitsha, ubudlelwane obonwabileyo nolungeleleneyo, okanye uthando. Okukhona unkcenkceshela ivatala yamaphupha, kokukhona uthando luya kukhawuleza lonyamalale. Ukuba isiqhamo siqine kakhulu kwaye incasa inencasa enje ngeswekile, isenokuba yeyona "thando lobomi" ludumileyo ulaziyo okanye ulaziyo kwiqabane lakho langoku.
Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolikwa ngokubanzi
Imifanekiso yamaphupha emelon inokusetyenziswa njengophawu kuhlalutyo lokulala ngokubanzi. Ukonwaba kuthando Makuqwalaselwe. Nabani na ophupha ngesiqhamo esinje unokulindela iqabane elilungileyo kunye nolwalamano olonwabileyo okanye i-adventure.
Ukutya i-melon ephupheni kunokuqwalaselwa njengenye. isilumkiso ukujongwa ngokungxama nangokuphelelwa ngumonde. Abo baphuphayo akufuneki bahendwe ukuba benze izinto ngokungxama ekuvukeni ubomi, kodwa kufuneka benze izigqibo ezinengcinga nengqiqo. Ukujongwa ngokubanzi, le meko yamaphupha ikwanokukhomba kwiziphumo ezothusayo zolonwabo umntu anokujongana nalo.
Si abathandi okanye abantu abatshatileyo baphupha isitya sokubhowula, kufuneka bazilungiselele amaqabane angonelisekanga. Oku ukungoneliseki Nangona kunjalo, ayifanelanga ukungahoywa, kodwa icacisiwe ngencoko. Ngaphandle koko, iingxaki zobudlelwane zinokuvela. Ukuba ubona iivatala zikhula ephupheni lakho, ungajonga kwikamva ngaphandle kobunzima okanye iingxaki.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uhlobo lwevatala lunokudlala indima ebalulekileyo ephupheni. Iivatala kwiphupha zifuzisela iimeko apho ukuphupha kwenza khona kube lula ngakumbi. Ukhetha ukonwabela kunye nokuphumla ebomini bokuvuka. ngqisha. Nangona kunjalo, ukuba uphumla ixesha elide, oku kuziphatha kunokukwenzakalisa.
Ikhabe yecantaloupe njengophawu lwephupha ibonisa ukuba ungumphuphi ziphathaUkuzama izinto ezintsha. Okanye ufuna ukukhuthaza abanye ukuba bazame into entsha.
Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yephupha kutolika imelon ephupheni njengophawu lothando, ulonwabo kunye Inkanuko. Umphuphi wanelisekile ngokuvusa ubomi kunye neqabane lakhe okanye umtshato kwaye ufumana ukuzaliseka kwakhe apho. I-melon emnandi isephupheni, ngakumbi ukutolika kobomi bokuvuka.
Ivatala njengophawu lwephupha ingabonisa ukuba ubuhlobo balowo uleleyo buya kukhula kakuhle. Ukuba ubona iivatala zedessert ephupheni lakho ehlotyeni, ikamva lakho liya kuba njalo Barato kwaye uphuhlise ngokweminqweno yakho.
Ukusika okanye ukwahlula imelon ngemela xa uleleyo kunokwanelisa intswelo yalowo uphuphayo kuluntu okanye bonisa uluntu. Lowo uleleyo ufuna ukuchitha ubomi bakhe bemihla ngemihla kunye nolonwabo kunye nabanye abantu kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «imelon» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "imelon" njengesiqhamo ephupheni lingabonisa ukuba umphuphi uya kuphuhlisa kwaye amilisele izimvo kunye neeprojekthi ezintsha. Umfanekiso wephupha ubuchule kwaye ubonise amandla okudala alo mntu kuthethwa ngaye.